Fanatanjahantena sy fanatanjahantena | Fampahalalana mahasoa ho an'ny rehetra.
Topic: Sport and Fitness
Karazana bararata: Misy vokany ve ny fiofanana?
Ny haben'ny bara dia mitana andraikitra lehibe mandritra ny fiofanana miaraka amin'ity karazana fitaovana ity. Misy anarana maromaro izay matetika mifandray amin'izy ireo. Fa matetika ny projectile dia antsoina hoe "bar parallèle" na ...
Môtô sambo "Mercury": toetra sy hevitra. Toerana môtô ivelany amin'ny Mercury
Ny orinasa Japoney "Mercury" dia misahana manokana amin'ny famokarana motera ivelany amin'ny fahaiza-manao isan-karazany. Anisan'ireo vokatra ao amin'ity orinasa ity, ny mpampiasa dia afaka mahita fanovana roa-kapoka sy kapoka efatra. Raha mino ny fanamarihan'ny tompony ianao, dia ...
Ny fitaovan'ny kianja fanatanjahantena any am-pianarana, any an-tsekoly, eny an-dalambe: GOST. Iza no tafiditra amin'ny fitaovana ara-panatanjahan-tena?
Ny kianja filalaovana fanatanjahan-tena any ivelany dia manampy amin'ny fitazonana sy fampivoarana ny fahasalaman'ny firenena. Amin'izao fotoana izao, ny kianja filalaovana dia toerana iray ampiasain'ny ankizy sy ny olon-dehibe ...
Fanjonoana any Belgorod - ny toerana tsara indrindra
Nangonina ny lahatra, voavonjy ny kankana, miady ny toe-tsaina ary mibitsibitsika ny toetr'andro. Azonao atao ny mamely ny arabe. Mijanona irery ihany ny manapa-kevitra hoe aiza no toerana hanjonoana any Belgorod sy ny manodidina an'ity tanàna mahafinaritra ity. ...
PSO -1. PSO sniper range - 1. Optical sniper
Ny fahitana optika dia ampahany tsy miankina amin'ny sniper. Ity fitaovana ity dia tena ilaina amin'ny fitifirana mety, haingana sy marina. Izy irery ihany no mamela anao hanatratra ilay lasibatra lavitra be. Noho ny fisian'ny valaka sy ny mety hitombo ...
Mivelatra ny dingana roa. Ny technique dia manova ny lakandranon'i ski roa
Ny lozam-pifamoivoizana misy dingana roa (sary maneho an'io dia haseho etsy ambany) dia heverina ho fomba lehibe fanaovana ski amin'ny faritra samihafa sy ny fivezivezena. Io dia mandaitra indrindra amin'ny malefaka (hatramin'ny 2 °) sy ...
Fa maninona no antsoina hoe "soavaly" i CSKA, ary "mpitaingin-tsoavaly" ny mpankafy azy?
Mpankafy baolina kitra maro no liana amin'ilay fanontaniana: nahoana ny CSKA no antsoina hoe "soavaly", ary ireo mpankafy azy - "soavaly"? Ary tena, nahoana? Ho hitanao ao amin'ny lahatsoratra ny valin'io fanontaniana io. Fitsangatsanganana ara-tantara Nahoana no antsoina hoe CSKA ...
Damask sy mofomamy damask
Ny teknolojia fanaovana antsy tsy mahazaka dia efa an'arivony taona lasa izay. Toa amin'ny dingana teknolojia ankehitriny, ny olona iray dia afaka manadino ireo fomba taloha fanaovana elatra ary mifindra amin'ny fomba fahandro mandroso kokoa amin'ny fanaovana azy. ...
Mandeha manjono eny amin'ny Ranomasina Mena. Toerana trondro
Ny Ranomasina fotsy, izay helodrano lehibe any amin'ny Ranomasina Arktika, dia mangatsiaka ampy. Na izany aza, mahasarika olona maro ny skerry sy ny habakabaka ary koa ny toetra taiga mahagaga. Tonga eto ny olona mangingina noho ny tabataba ...
"Chertanovo" dia sekoly baolina kitra ho an'ny ankizy. Famerenana ny sekoly baolina kitra
"Chertanovo" dia sekoly baolina kitra izay nanjary iray amin'ireo andrimpanjakana manandanja indrindra any Moskoa sy ny Distrika afovoany tato anatin'ny taona vitsivitsy. Noho ny fanohanan'ny Governemanta Moskoa ao ambadiky ny lamosin'izy ireo dia afaka ...
"Bodyflex": hevitra, aloha sy aorian'ny sary. Fanatanjahan-tena miaina ho an'ny fihenan'ny lanja
Bodyflex dia rafitra iray tsy manam-paharoa izay mamela anao hamoy ireo kilao fanampiny. Ity karazana fampihetseham-batana ho an'ny fihenan-danja ity dia noforonin'i Greer Childers. Raha ny filazany dia miharihary ny valiny aorian'ny kilasy roa herinandro. Bebe kokoa…
Afaka misotro rano aho aorian'ny fampiofanana ary ohatrinona?
Fantatry ny rehetra ny mahasoa amin'ny rano amin'ny vatana. Manafaingana ny metabolisma, mameno vavony foana, manome fahatsapana fahafenoana mandritra ny fotoana fohy. Ny rano dia ampiasain'ny atleta amin'ny fanatanjahan-tena rehetra ...
Ny fomba hahazoana lanja amin'ny lehilahy malemy: programa fanofanana. Fomba hahazoana tombony hozatra
Ahoana ny fomba ahazoana lanja amin'ny bandy mahia? Matetika io fanontaniana io dia apetraky ny maro izay manana endrika sasany momba ny endrik'izy ireo. Ahoana no hanatanterahana izany faniriana izany? Vakio ny momba ireo nuansa manan-danja ...
Ny saina olimpika - inona no tandindony?
Ny fiandohan'ny Lalao Olaimpika dia napetraka tany atsimon'i Gresy tao amin'ny tanànan'i Olympia. Ny programa lalao tany am-boalohany dia nahitana dingana iray. Ankoatr'izay, ny programa dia nanomboka nampiana karazana fifaninanana vaovao: mihazakazaka amin'ny ...
Fanjonoana amin'ny plastika mena: singanina amin'ny fanjonoana, fitaovana, tsiambaratelo ary toro-hevitra
Vao tsy ela akory izay, dia nanjary nisy karazan-jono vaovao, izay misy foam-borona. Amin'izao fotoana izao dia mbola misy ny mpanjono mpankafy tsy mahalala na inona na inona momba ny fomba fanjonoana mahaliana toy izany. Izany ...
Lalao twister: fitsipika
Inona no tokony hatao amin'ny orinasa sariaka amin'ny natiora, raha mbola tsy vonona ny «barbecue» dia tsy ampy ny rakotra ho an'ny tsirairay, ary mihoatra ny ampy ny angovo sy ny faniriana hampiseho tena ary hampihomehy ny hafa? Fotoana izao hahazoana ...
Mpitaingina fiaramanidina Wall: safidy sy famaritana
Ny mponina amin'ny tanàn-dehibe dia mitombo hatrany ny fitadiavana fitaterana tontolo iainana sy mahasalama toy ny bisikileta. Na izany aza, ny tena olana amin'ity tranga ity dia ny mahita toerana azo itehirizana vy ...
Diosezy Victoria Romanets: menus, fanolorana sy valiny
Fantatrao ve ny fomba nampihenan'ny Victoria Romanets lanja? Fantatrao ve ny sakafo fihinany? Raha tsia dia mamporisika anao izahay hamaky ilay lahatsoratra. Manantena izahay fa ny fampahalalana raketiny dia hanampy anao amin'ny ...
Head (alpine skiing): famaritana sy hevitra
Ny isan'ny mpankafy ski alpine dia mitombo isan-taona eto amin'ny firenentsika. Ny trano fandraisam-bahiny vaovao misy fitaovana tsara dia hita ao Rosia, izay ahafahanao mitaingina làlana tsara ary mifalifaly fotsiny. By ...
Cocktails ho an'ny fahavoazan'ny fahavoazana: fanavaozana sy ny resipe. Lisitry ny cocktails mahomby
Na dia vitsy aza ny olona matoky pilina fihinanana sakafo, sakafo ara-pahasalamana, ny mifanohitra amin'izany, isan-taona dia mahita namana vaovao. Raha ny marina, ny fahaverezan'ny lanja dia tsy tokony ho zavatra manokana, manitsy kely ny ...
52 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,557.